Nambaran’ny tomponandraikitry ny foibem-pitondrana ankapobeny misahana ny fitantanam-bolan’ny mpiasam-panjakana fa mpiasa miisa 30 411 no tsy hita tao anatin’ny antontan-kevitra (base de données) mihitsy ny daty nahaterahany. Amin’izao fotoana izao, mpiasa 10 104 no efa nahazoana kara-panondro ka efa fantatra avokoa ny mombamomba azy. 109 amin’izy ireo no efa feno 60 taona no ho miakatra.
Hatreto, 80 764 ny isan’ny karatra fandraisana vola fisotroan-dronono efa nalain’ny tompony, toerana 48 no mbola tsy vita ny fizarana ary hatao amin’ny main-tany. Ankoatra ny fandraisana fisotroan-dronono, entina hikarakarana ny fandraisana an-tanana rehefa marary ny zokiolona ity karatra nohavaozina ity ka tokony tsy hangataka andro izy ireo.
Ahina tsy ho ampy ny rotsak’orana amin’ny faritra roa ampahatelon’ny tapany andrefan’ny Nosy sy any atsimo Atsinanana amin’ity volana janoary ity, araka ny fanambaran’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Eto Antananarivo, be loatra ny rotsak’orana ka mahazo filazana loza manambana ny kaominina maro. Any amin’ny volana marsa vao hihena ny rotsak’orana eto Analamanga raha mitaha amin’ny tokony ho izy.
Nilamina ny teny Analakely, omaly. Manohy ary hentitra amin’ny fanadiovana sy ny fandaminana ataony ny kaominin’Antananarivo. Betsaka ny nankasitraka ny filaminana sy ny fahatoniana niainana teny Analakely, omaly. Maniry ny hitohizan’izany filaminana izany ny ankamaroan’ireo mpisehatra amin’ny tambajotra sosialy, omaly.